သူများနောက်လိုက်မဖြစ်ကြနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Tank » သူများနောက်လိုက်မဖြစ်ကြနဲ့	6
Posted by Ko out of... on Sep 27, 2015 in Think Tank |6comments
ငါဖြစ်ချင်တာကိုမလုပ်ရရင် သူများဖြစ်ချင်သည့် အရာနောက်ကို လိုက်လုပ်ရမလား? သို့မဟုတ် ငါဖြစ်ချင်တာလည်း လုပ်ခွင့်မရ သူများနောက်လိုက်လည်း မဖြစ်ချင် ဒါဆိုရင်ငါ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ဒါဆိုရင် ဘယ်လောက်များများ လုပ်ခွင့်ရမှ ငါလုပ်မယ်ဆိုတာထက် ငါတတ်စွမ်းသလောက် ငါလုပ်နိုင်သလောက် လုပ်မှဘဲ လောကအတွက် အလုပ်လုပ်ရတော့မယ် ဒါကြောင့်
How much? ဆိုတာထက် How can?
နဲ့ဘဲ ငါသိသလောက် ငါတတ်သလောက် သတင်း Message တော့ထားခဲ့ရမှဘဲ?
အမျော် အကြောက်ကင်း စိတ္တဇကင်းမဲ့ပြီး လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှု အမှန်ရနိုင်ကြပါစေ…
ဦးကြောင်ကြီး says: မဘသကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မိုးပြာဂိုဏ်း ရှေ့ထွက်တော်မူဗါ။
kai says: သခင်မျိုးဟေ့.. ဒို့ဘားမန်င်း..။
ထေရာဝါဒဘုန်းဘုန်းတွေက….ဆရာ..။ နောက်..ဆရာတော်.။.နောက်.. အရှင်..။ အဲဒီကတဆင့်တက်.. ဘုရား..။ တဆင့်ထပ်တက်.. ဘုရားကြီး..။
လူတွေကျ.. တကာ.. မင်း..ငါ.. ဆရာတော်.. ဘုန်းကြီး..
ဗိုလ်..။ နောက်.. ဗိုလ်ကြီး..ဗိုလ်မှုး.. မြင့်ပေးလိုက်တာ.. ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးအထိ…။
ကိုယ်တိုင်ကလည်း.. အသက်ဘယ်လောက်ငယ်ငယ်.. အရပ်သားကို.. မင်း..ငါ…။
ဘုရားသားနဲ့.. စစ်သား.. ဒီလိုလုပ်တော့…
ကျောင်းသား.. အဖြူဂုဏ်းက.. အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ရင်း.. သခင်ဘသောင်းက…
ဂျာမဏီက.. ဂျာမန်ပါမောက္ခနီချေးရဲ့.. မဟာလူသားဝါဒကိုအခြေခံ.. မာန်တွေအားတွေမြှင့်ရင်း.. လုပ်ပြလိုက်တာက.. သခင်..။ အဲဒီအမည်ခေါ်စနစ်.. ပြန်အသက်မသွင်းနိုင်သရွေ့.. ။ မူလဘူတကို..အမြစ်နှုတ်မဖျက်နိုင်သရွေ့..။
သာဓု…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: သခင်​မျိုး​ဟေ့ ဒို့မပါ
​ဘေးထွက်​ထိုင်​​နေရတာကြာလှ​ပေါ့ ​ပြောချင်​ဘူး ​ပြောချင်​ဘူး ​ပြောကိုမ​ပြောချင်​​တော့ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: Towards the Ubermensch
from Nietzsche’s Thus spoke Zarathustra, p.3,4,5, Walter Kaufmann transl.
What is difficult? asks the spirit that would bear much, and kneels down likeacamel wanting to be well loaded. What is most difficult, O heroes, asks the spirit that would bear much, that I may take it upon myself and exult in my strength? Is it not humbling oneself to wound one’s haughtiness? Letting one’s folly shine to mock one’s wisdom?…
Who is the great dragon whom the spirit will no longer call lord and god? “Thou shalt” is the name of the great dragon. But the spirit of the lion says, “I will.” “Thou shalt” lies in his way, sparkling like gold, an animal covered with scales; and on every scale shinesagolden “thou shalt.”
from Nietzsche’s Thus spoke Zarathustra, part I, Walter Kaufmann transl.
@QUIL@ says: ဂျော်ဒန်ရီဗာကို အဝတ်မပါပဲ ဖြတ်ကူးပြဘာ့မယ်
Alinsett @ Maung Thura says: .ရှေ့ကလည်းမသွား
ကန့်လန့်တိုက် ဘေးတိုက်သွားသူတွေလည်း ရှိတယ်နော်